Laptọọpụ kacha mma dịka mmefu ego gị siri dị, nke ị ga-ahọrọ?
Mgbe ụfọdụ, ọtụtụ ndị ọrụ na-achọghị naanị atụmatụ na laptọọpụ ọhụrụ, kama kama mkpa iji tụnyere laptọọpụ dabere na ọnụahịa. N'ụzọ dị otú a, ọ nwere ike ime ka ọ dịkwuo mma ka mkpa nke onye ọ bụla dị. Ihe dị mkpa iji zere imefusị ego buru ibu na ngwaike nke ị na-agaghị enwe ike irite uru na ya, ma ọ bụ nwee ike ịhazigharị mmefu ego gị ọzọ.
Ya mere, site na nzacha laptọọpụ site na ọnụ ahịa ọnụahịa, ị nwere ike nweta kpọmkwem kedu ihe kacha mma maka akụnụba gị, na-enyocha naanị ngwa nke dị n'ime ike ịzụrụ ihe, na ịzere ndị ọzọ niile ...
Laptọọpụ maka ihe na-erughị € 500
Ego ole ka ị na-achọ laptọọpụ elementrịIji rụọ ọrụ ndị dị mfe dị ka ịgagharị ịntanetị, ịlele ozi, ịkpọ ọdịnaya multimedia, ma ọ bụ ngwa ọfịs, ọ gaghị adị mkpa imefu nnukwu ego iji mezuo ihe ị tụrụ anya ya.
N'oge ndị ọzọ, ihe ị chọrọ bụ laptọọpụ nke abụọ maka teleworking, ka ị ghara ịgwakọta ụlọ gị na ngwá ọrụ, n'ihi ya, ị na-achọghị imefu nke ukwuu na nke a nke abụọ akụrụngwa. Cheta na nke a bụ nnukwu nhọrọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka nọ n'ụlọ ndị gị na ha na-ekekọrịta laptọọpụ. Ma ọ bụghị ya, azụmahịa, ndị ahịa, akwụkwọ ụtụ isi, wdg, nwere ike kwụsị nke ọma ...
Hụ laptọọpụ niile maka ihe na-erughị € 500
Laptọọpụ maka ihe na-erughị € 1000
Ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ otu nha anya. Ngwaahịa nwere ike iji mee ihe ọ bụla. Site na ịme ngwa ndị dị mkpa, na-enwe ike ịrụ ọrụ na ha ma ọ bụ igwu egwuregwu. Iji nweta nke ahụ, ọnụ ahịa ọnụahịa a nwere ike ịmegharị nke ọma na ihe ị chọrọ.
€ 1000 bụkwa ihe mgbochi akparamaagwa nke akụ na ụba dị ezigbo mkpa. Ihe karịrị nke ahụ nwere ike ịdị ukwuu maka ọtụtụ ezinụlọ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ. Ọzọkwa, na ọ na-efu ihe na-erughị nke ahụ apụtaghị na ọ dị njọ, n'ụzọ dị iche. Afọ ndị ahụ agaala mgbe laptọọpụ bụ kọmpụta dị egwu ma dị oke ọnụ nke na-eri puku kwuru puku euro ...
Hụ laptọọpụ niile maka ihe na-erughị € 1000
Laptọọpụ egwuregwu na-erughị € 1000
Enwere egwuregwu laptọọpụ oke ọnụ, ọtụtụ puku euro. Mana, ọ bụrụ na enyochala aha AAA, ị ga-enwe ike ịchọpụta na opekempe na ihe ndị a tụrụ aro ka ezutela na laptọọpụ egwuregwu ndị a na-erughị € 1000.
Akụrụngwa etolitela na-enye ọmarịcha arụmọrụ na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Ya mere, ị nwere ike nweta akụrụngwa nke na-agaghị emechu ndị egwuregwu na-achọsi ike, yana Intel Core i7 ma ọ bụ AMD Ryzen 7 processors, eserese arụmọrụ dị elu, ezigbo RAM, ezigbo ihuenyo na draịva siri ike. Zuru oke maka ihe ịchọrọ ...
Hụ laptọọpụ egwuregwu niile na-erughị € 1000
Uru kacha mma maka laptọọpụ ego
una ịzụ ahịa smart bụ ịkwalite laptọọpụ iji họrọ akara na ụdị nke na-enye uru kacha mma maka ego. Ọ bụ ịzụrụ ihe kacha mma, na-enweta uru kachasị mma na ọnụahịa kacha ala.
Ezubere akụrụngwa ndị a maka ndị ọrụ chọrọ akụrụngwa dabara na ụdị ngwa niile, na-enweghị ọtụtụ ihe a chọrọ, mana na ha na-edobe opekempe arụmọrụ, ịdịmma na ntụkwasị obi.
Hụ kọmpụta kacha mma dị ọnụ ala
Ị na-achọ laptọọpụ ọnụ ahịa kacha mma? Echefula nhọrọ a na ụdị kachasị mma na ntuziaka ga-enyere gị aka ịhọrọ.
Enwere laptọọpụ egwuregwu dị ọnụ ala? N'ezie. Banye wee chọpụta ụdị kachasị mma na-agaghị agafe ihe mgbochi nke € 1000
Na-achọ laptọọpụ na-erughị 1000 euro? Ejila ihe karịrị ihe ịchọrọ na kọmpụta dị mma. N'ime ntuziaka a, ị ga-ahụ ndị kacha mma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ dị ọnụ ala, ebe a ị ga-ahụ ihe karịrị 25 laptọọpụ na-eri ihe na-erughị € 500 ma na-ere. Kedu nke masịrị gị?